बाबुरामको प्रश्न - 'कुलमानको नियुक्तिमा क-कस्को विरोध र समर्थन थियो ?' Canada Nepal
काठमाडौँ - जनता समाजवादी पार्टीका संघीय परिषद अध्यक्ष डा. बाबुराम भट्टराईले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकमा नियुक्त भएका कुलमान घिसिङलाई बधाई दिएका छन् ।
बुधबार सामाजिक सञ्जालमार्फत डा. भट्टराईले घिसिङलाई बधाई दिएका हुन् । उनले कुलमानको कमब्याक स्वागतयोग्य रहेको पनि बताएका छन् ।
उनले उनको नियुक्तिमा कसको प्रस्ताव,कसको सहमति,कसको सहयोग,कसको असहमति,कसको असहयोग,कसको विरोध भन्न जरुरी रहेको पनि बताएका छन् ।
उनले लेखेका छन - 'कुलमानको कमब्याक स्वागतयोग्य छ! वधाई! तर उनको नियुक्तिमा कसको प्रस्ताव,कसको सहमति,कसको सहयोग,कसको असहमति,कसको असहयोग,कसको विरोध आदि इत्यादि पनि भन्न जरूरी छ? कस्ता दिन आए....!!'
सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले घिसिङलाई नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकमा नियुक्त गरेको छ । प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकमा घिसिङलाई नियुक्त गर्ने प्रस्ताव ऊर्जा मन्त्री पम्फा भुसालले मन्त्रिपरिषद्‍मा लगेकी थिइन्।
श्रावण २७, २०७८ बुधवार १२:२६:४१ बजे : प्रकाशित